AIFM MADAGASIKARA: Nanolotra lamba firakotra sy akanjo mafana ho an’ny sahirana teny Ambohimanarina - Journal Madagascar
Fanamarihana ny fankalazana fetim-pirenena. Fizarana fanomezana ho an’ireo sahirana avy ao amin’ny FJKM Antanety Fitahiana Ambohimanarina no nanamarihan’ny AIFM Madagasikara (Alliance Internationale des Femmes de France et Madagascar) ny fankalazana ny faha-60 taona niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara. Ny 25 jona 2020 teo dia nanolotra lamba firakotra mafana (couette) ho an’ny beantitra miisa 12, akanjo mafana ho an’olon-dehibe sy ankizy miisa 24 ny fikambanana. Ankoatra izany, samy nahazo vatomamy sy tsindrintsakafo avokoa izy 36 mianadahy mianaka. “ Mamerina ny tenin’ny ramatoa mpitandrina Ramambasoa Andrianasolo Rojo teo aho hoe: raha misy mahatsiaro manome na dia rano mangatsiaka an’ireny madinika ireny dia lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra. Iraka ataon’ny AIFM ny mifanampy, mifampitondra ary mifankatia ka izany indrindra no anton’izao fanomezana izao. Ny andro rahateo mamirifiry ka ilaina ny manao mafana”, hoy ny Filohan’ny AIFM Madagasikara, Rasendralalao Hantanoro nandritra ny fandraisam-pitenenany. Nambarany fa avy amin’ny vehivavy sy lehilahy mpikambana ao amin’ny AIFM ireo fanampiana ireo.
Nohamafisiny fa Ramatoa Ranaivo Francine no mpanorina ny AIFM. “Tany Frantsa no niandohan’ny fikambanana noho ny fitiavan’ny Filoha mpanorina ny vehivavy Malagasy nila ravinahitra tany ivelany izay nandalo fotoan-tsarotra. Asa soa hanampiana an’ireo vehivavy ireo no tena tanjony. Ankehitriny, manampy sy manome tantsoroka ny ankizy ihany koa ny fikambanana ary niitatra teto Madagasikara izany”, hoy Rasendralalao Hantanoro.